I-Commission Scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ) - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Izinhlelo zePathwayI-Commission Scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ)
Indlela yakho eya eCanadaI-Commission Scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ)
ICommission Scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ) yasungulwa nguHulumeni waseQuebec ngesikhathi kuhlelwa kabusha amabhodi ezikole ngolimi ngoJulayi 1, 1998. Yadalwa yiJérôme-Le Royer School Board.
Ku-2017-2018, iKhomishini Scolaire de la Pointe-de-l'Île inikeze ngezinsizakalo kubafundi abangaphezu kwama-43,600, kufaka phakathi abayi-22,386 ezikoleni zasenkulisa nezamabanga aphansi, abangu-10,765 esikoleni samabanga aphakeme, abangu-5,925 emfundweni yabantu abadala kanye no-4,528 ekuqeqesheni amakhono. Inabasebenzi abangaphezu kuka-7,300 nesabelomali esingu- $ 370 million.
I-CSPÎ inezikole ezingama-40 zokuqala, izikole eziphezulu eziyi-7, izikole eziyi-4 ezikhethekile (izikole zamabanga aphansi kanye nezamabanga aphezulu) zabafundi abanezinkinga ezinkulu zokushintshwa kwezimo, izikhungo zemfundo eyi-10 (ukuqeqeshwa okujwayelekile noma kwezamakhono), isikhungo senkonzo yamabhizinisi kanye neCentre de duction de hole du Grand Montréal.
Itholakala engxenyeni esenyakatho-mpumalanga yesiqhingi saseMontréal, i-CSPÎ ihlanganisa indawo engamakhilomitha-skwele angama-93, ehlanganisa izindawo zedolobha laseMontréal-Est nezindawo ezine zaseMontréal, iRivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles, iSanta- ULeonard, Anjou noMontréal-Nord
I-Commission Scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ)Olunye ulwazi
I-ElectronicsRAYCHANICS YEMISEBENZI EMISELWE UKUKHANYA
Lolu hlelo lukulungiselela ukuthi usebenze njengomakhenikha kagesi ezinhlelweni ezizisebenzelayo.
Inikeza ulwazi futhi ithuthukise amakhono nezimo zengqondo ezidingekayo ekusebenzeni nasekulondolozeni imishini yokukhiqiza ezisebenzelayo; axazulule izinkinga ezahlukahlukene nezinhlobonhlobo zemishini, i-hydraulic, i-pneumatic, kagesi kanye nezinto ze-elekthronikhi; futhi usebenze ezinhlotsheni eziningi zezinkampani zokucubungula zisebenzisa amasistimu wokulawula azenzakalelayo.
Hlanganisa futhi uhlanganise izingxenye zensimbi ezihlanganisiwe noma ze-aluminium ngokwezinhlelo nemiyalo.
Sebenzisa futhi ulungise amathuluzi ahlukahlukene wemishini ukusika noma ukugaya insimbi, ipulasitiki noma ezinye izinto ngokuya ngezinhlelo nemiyalo ethile. Kumele kwaziwe ukuthi esikhungweni sethu sokuqeqesha wonke amakhono anikezwa enkulumweni futhi AKUFUNDI ukufundiswa ngawodwana.
Yenza umsebenzi wokuxilonga, wokulungisa nokulungisa izingxenye ezahlukahlukene zemoto.
Lolu hlelo luholela kudiploma yezifundo zobungcweti (i-Dep) kumakhenikhi wezimoto.
Umsebenzi wokuqanjwa kwemifanekiso ubandakanya ukudala imibhalo ebonakalayo efaka imibhalo, izithombe nemifanekiso okuhloswe ngayo ukwenziwa emithonjeni ehlukene njengamaphephandaba, nomagazini. Umqambi wemifanekiso angahle abambe iqhaza ekwenziweni kwemibhalo kagesi ezosatshalaliswa kumawebhusayithi ezinkundla ezahlukene ezifana namakhompyutha, amafoni ahlakaniphile, amaphilisi edijithali, abafundi nabanye. Imisebenzi yalomsebenzi yenziwa endaweni enamakhompyutha amaningi edinga ukuqeqeshwa okuhle. Umqambi wemifanekiso uyadingeka ukuthi asebenze nekhompyutha, amaphilisi we-graphic, isoftware ekhethekile yokushicilela ideskithophu kuwebhu kanye nabaphrinta abahlukahlukene. Ngokucacile, imisebenzi yomqambi wehluzo wekhompyutha aqukethe:
dala amamodeli wesakhiwo
thola izithombe ezahlukahlukene (izithombe, ukwenziwa kwedijithali, njll.)
ukucubungula nokushintsha izithombe nemifanekiso
lungiselela amadokhumenti wokuphrinta noma wokusabalalisa nge-elekthronikhi
yenza izakhiwo zokuphrinta noma zokuhambisa nge-elekthronikhi
yenza izilinganiso zezindleko nesikhathi somsebenzi ngokusekelwa kumaphrojekthi ahlongozwayo kuwo
Le khosi yokuqeqesha yamahora angu-1800 izokunikeza ulwazi kanye namakhono adingekayo ukuze usebenzise imithetho yokubhala, imigomo yokuxhumana ngokubuka, ukulungiselela ukuhlekisa, ukukhiqiza imifanekiso nokucubungula izithombe usebenzisa ikhompyutha, ukwakheka kwemibhalo yemibala yokuphrinta noma ye-elekthronikhi. ukusatshalaliswa, ukufakwa kanye nokuqedwa kwemibhalo, ukuhlelwa kwevidiyo, imisebenzi yokushicilela ideskithophu, ukusetshenziswa kwemishini yezokuxhumana ngocingo, ukuxazululwa kwezinkinga zomsebenzi wekhompyutha, ukuhlolwa kwekhwalithi yencwadi kanye nokusebenza ngokubambisana.
Yiba nezinga elisemthethweni le-French B2